महामारीमा नेपाल सरकार किन फितलो निर्णंय गरि बस्छ ? : || www.vlognepal.com ||
November 14, 2020 Filed under ब्लग / रिपोर्ट >>>> Please Subscribe our Youtube Channel
झण्डै २/३ मतले दिएर नेपाली जनताले बिश्वास गरेको हालको नेकपा सरकारले दिन प्रतिदिन जनताको बिश्वास गुमाउँदै गईरहेको अनुभुती हुन थालेको छ । चैत्र-२०७६ बाट नेपालमा कोरोना ले बिस्तारै जनता माझ उपस्थिती देखाउँदै गएको छ । झण्डै एक बर्षको दौरानमा नेपालमा कोरोना संक्रमित लाख काटि सकेका छन् । एकातिर कमाई गरेर खान पर्ने जनताको बाध्यता आर्को तिर सरकारले गरेको केटा केटी निर्णय.. कता कता तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन थालेको छ । एक जना संक्रमित देशमा देखिदा कडा लकडाउन गरेको सरकारले हाल दैनिक ३ हजार सम्म संक्रमित भेट्टिदा पनी मस्त छ पार्टी भित्र को आन्तरिक द्वन्द मिलाउन ! जनता पनी निस्फिक्रछन् । नेपालीहरुको महान् चाड दशै-तिहार-छठ जस्ता सामुहिक भेटघाट गरेर मनाउने चाडबाड मा त झन यो बर्ष जनता गत बर्ष झै रमाए । संक्रमित बढ्दै गए बहुमतको नेकपा सरकारले जनतालाई दिदै आएको स्वास्थ्य सुबिधामा कटौती गर्यो र पिसिआर का साथै स्वास्थ्य उपचार आफैले गर्न पर्छ भन्ने निर्णय सुनायो ।
नियमित सरकारलाई राजश्व तिरीरहेका जनतालाई सरकारले महामारीको समयमा स्वास्थ्य शेवा र सुरक्षा आफै गर भनेर जारी गरेको उर्दी मनपरेन र बिरोध शुरु गरे । सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गर्दै निजी अस्पताल बाहेक सरकारी अस्पतालले समेत आ-आफ्नो अस्पतालको अफर रेट सार्बजनिकरण गरेे निर्लज्ज पारामा । शेवा ने धर्म हो भन्ने नारालाई छोपी दिए नेपालका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले । बिरामी परेर अस्पतालको ढोकामा पुग्दा नाफाखोरहरुले पहिला यति पैसा डिपोजिट गर अनि स्वास्थ्य शेवा दिन्छु भन्न थाले । नेकपाको सरकार मुक दर्शक बनेर बस्यो । पैसा नहुने र ज्यान बचाउन जनतालाई हम्मे नै पर्यो भन्दा फरक नपर्ला । कस्तो सरकार, कस्तो सासक, कस्ता झुण्ड चुक्क बोलेनन् जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी दिन सक्नु पर्छ भनेर । पछि सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो र सरकार एक कदम फेरी पछि हट्यो र भन्यो सरकारी अस्पतालमा बिश्व महामारी कोभिडको स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क हुनेछ भनेर । तर फेरी सरकारी अस्पतालले सूचना निकालेको ज्वरो नाप्दा १०१ डिग्री भन्दा माथीका बिरामीलाई मात्र पिसिआर नि:शुल्क गरिने छ । ए बाबा कोरोनाको लक्षण ज्बरो मात्र होइन रहेछ भनेर थाहा पाउदा पाउँदै किन सरकार पटक पटक नचाहिने कुरा मा निर्णय गरेर बसि रहेको छ ??
जनताले बिरोध गरे पछि हट्ने नत्र निर्णय लाद्ने काम किन भइरहेको छ ? के सरकारी निर्णय गर्ने ब्यक्तिहरु पदका निम्ति लायक नभएका हुन् त ?? कि महामारी मा कसरी काम-निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने अनुभव नभएका हुन् । पछिल्ला दिनमा नेकपा सरकारले गरेका निर्णयहरु पटक पटक सच्चिनु साच्चिकै अनुभव कम भएका नेताहरुले देश हाँकी रहेका छन् भन्ने बुझ्नु फरक नपर्ला । सिकारु र कम अनुभवीले हाँकेको हो भने कुनै ठूलो थप दुर्घटनामा देश नपरोस् ! कोभिड बाट जनता आफै बाँचौ र परिबार लाई बँचाउ !
सन्तोष भट्टराई | कोरोना कहर सबैतिर ब्याप्त रहेकै बेला शुक्रबार काठमाण्डौ उपत्यकाका सिडिओहरुको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो उपत्यका भित्र शेवामा